जीवन बिमाले फेरीएका दिन,दुख पछिको सुखमा संजिता – MeroJilla.com
जीवन बिमाले फेरीएका दिन,दुख पछिको सुखमा संजिता
गोबिन्द अधिकारी ।
कुनैबेला रेडियोग्राफरको जागिर खाँदा आफुलाई चाहिएको चीज किन्न पनि समस्या पर्ने अवस्था थियो उनको । यहि जागिरले जीन्दगी चलाउन सकिन्न भन्ने उनलाई राम्रो संग थाहा थियो । ईलामको नारायणस्थान २ मा जन्मिएकी संजिता भक्तराज अहिले मासिक ४ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन भन्दा सायदै कमैले पत्याउँछन् । बिमाले उनलाई एकाएक धनी बनाउँदै लगेको हो ।
एलआईसी जीवनबिमा कम्पनीमा जागिरे भएदेखि उनको प्रगति उर्र्लिँदै गएको हो । २०५८ सालमा उनी उच्च शिक्षा लिन काठमाण्डौमा आईन । बाबुआमाले घरबाट पठाएको पैसाले कहिल्यै पुग्थेन । पैसाको अभावले उनले २०५९ सालमा हिमाल हस्पिटल र व्लुक्रस हस्पिटलमा रेडियोग्राफर भएर काम गर्न थालिन । उनले दुई ठाउँमा गरेर मासिक ८ हजार रुपैयाँ कमाउने गर्थिन् । त्यो पैसाले काठमाण्डौको मंहगीमा दैनिक आवश्यकता पुरा गर्न समस्या थियो ।
उनले आफुना आवश्यकता पुरा गर्न अस्पतालमा काम गर्दै गईन । करिव ५÷६ बर्षको अन्तरालमा बिभिन्न आरोह अवरोह संगै सफलताका सिँढीहरु आफैँ जोडिएर आए । उनी हस्पिटलमा काम गर्दा गर्दै बिमामै काम गर्ने बिजयकुमार कर्ण संग भेट भयो । जीवन बिमाको बारेमा कर्णबाटै संचिताले थाहा पाउने मौका पाईन । उनी संग भेट भएपछि उनले बिमाको बारेमा मात्रै थाहा पाईनन यसमा राम्रो कमाई हुने पनि राम्रो संग ज्ञान पाईन ।
करिव एकमहिनाको भेटघाट र चिनजान पछि उनी बिमाको एजेण्ट बनेर जीवनविमामा प्रवेश गरिन् । ईलामबाट काठमाण्डौमा आएर बिमामा काम गर्न सहज थिएन् । त्यसैमा पनि यूवतीलाई धेरैले बिश्वास गर्ने अवस्था थिएन् । अहिले त मानिसहरुलाई जीवनबिमाको बारेमा नकरात्मक धारणा छ । तर यिनै चुनौती चिर्दै ईलामे यूवती अहिले बिमामा यसरी दहरिएकी छिन् कि उनका बिगत कुनै फिल्मको कथाभन्दा फरक छैन् । जीवनका चक्र पानीघट्टाको चक्र घुमे झैँ घुम्दै थिए । उनको जीवन पनि सफलताको शिखरमा घुम्दै सफलता तिर लम्किन पो थाले । एजेण्टबाट एम.आर र अहिले एजेन्सी म्यानेजर बनेकी उनी विगत संझदा अहिले एउटा लामो सपना जस्तो लाग्ने बताउँछिन् ।
अविवाहिता उनी संग अहिले ललितपुरमा एउटा आलिसन महल छ । आफ्नै गाडीमा सयर गर्छिन । कुनै बेला महिलाले गाडी हाँकेको र मोटरसाईकल चलाएको देख्दा उनी अचम्ममा परेको सुनाउँछिन् । तर असंभव सोचेको कुरा अहिले उनले विमाबाटै पाएकी हुन् । उनले यो सफलता १४ वर्षको अवधीमा प्राप्त गर्न सफल भएको बताउँछिन् । यसरी एकाएक उनी जीवनमै नसोचेको सफलता प्राप्त गरेकोमा दंग छिन् । बिमाको बारेमा जनमानसमा रहेको धारणा परिवर्तन हुन सकेको छैन् । अहिले पनि बिमाको भुक्तानी मरेपछि मात्रै पाईन्छ भन्ने गलत धारणा कायमै छ । अझै बिमा गरे आयू घट्छ भन्ने गलत सोच चिर्न सहज पनि छैन् । यिनै असहज परिस्थितीलाई जित्दै संजिता विश्वका बिमाकर्मीहरु माझ सफलताको एउटा पात्र बनेकी छिन् ।
२०६३ सालमा आमा बितेपछि उनको जिम्मामा परिवारको खर्च चलाउने बाध्यता थपियो । उनले परिवारको खर्च पनि चलाउँछिन् । दुई बैनीहरुलाई राम्रो कलेजमा पढाउँदै आएकी छिन् । आफुले मात्रै धनी बन्दै गएकी छैनन संचिताले अरु गरिव मानिसहरुलाई पनि कमाईको केहि अंश सहयोग गर्दै आएकी छिन् । सामाजिक कार्यमा पनि उनले सकेको सहयोग गर्दै आएकी छिन् । आमाको संझनामा गरिव र दीनहिनलाई सहयोग गरेको उनले स्मरण गर्छिन् ।
उनीसंग एकसय ६० जना एजेण्ट आवद्ध छन् । उनले मासिक १० देखि ५० लाख सम्म प्रिमियम जम्मा गर्ने बताउँछिन् । बिमामा नाम, दाम र काम सबै पाईन्छ तर निरन्तर संघर्ष भने गर्नुपर्छ । चुनौतीहरु थुपैै्र आउँछन् तर, पन्छाएर अगाडी बढे सफल भईन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन उनी । उनी इन्स्युरेन्सको एम.डी. आर. डी मा रजिष्ट्रेशन गर्ने पहिलो महिला बनेकी छिन् । यो विरलै मानिसले पाउने अवसर हो । उनी नेपालकै पहिलो एम.आर.डी मा रेजिष्ट्रेशन गर्ने महिला बनेकी छिन् । यूरोपका सबै देश उनले घुम्ने मौका पाईसकेकी छिन् । युके, जापान, हङकङ, लगायतका देशमा पनि उनी बिमाकै अफरबाट पुग्न सफल भईन । उनी अव केहि समयपछि अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलिया घुम्दै छिन् ।
बिमाको एजेण्ट बन्नु भनेको कुनै नोकरी होईन एजेण्ट भनेको परामर्शदाता हुन भन्छिन् उनी । बिमा ठगी होईन इमान्दार सेवा हो भन्ने संचिता बिमा गरेर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सबैलाई आग्रह गर्छिन भने सके एजेण्ट भएरै काम गरे फाईदा हुने सुझाव दिन्छिन् । काम सानो ठुलो हुँदैन तर निरन्तर संघर्ष भने गर्नुपर्छ र अवसर पाउँदा फड्को पनि मार्न सक्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।